ग्राहक अवधारणा: तथ्या ,्क, रणनीति, र गणना (CRR बनाम DRR) | Martech Zone
हामी अधिग्रहणको बारेमा धेरै साझा गर्छौं तर पर्याप्तको बारेमा छैन ग्राहक प्रतिधारण। महान् मार्केटिंग रणनीतिहरू अधिक र अधिक बढि ड्राइभ गर्न को रूप मा सरल छैन, यो पनि सही लिड्स ड्राइभिंग को बारे मा छ। ग्राहकहरुलाई सम्हाल्नु भनेको नयाँ प्राप्त गर्ने लागतको सँधै अंश हो।
महामारीको साथ, कम्पनीहरूले हंक गरे र नयाँ उत्पादनहरू र सेवाहरू प्राप्त गर्नमा आक्रामक थिएनन्। थप रूपमा, व्यक्तिगत बिक्री बैठकहरू र मार्केटि con सम्मेलनहरूले अधिकांश कम्पनीहरूमा अधिग्रहण रणनीतिहरूलाई गम्भीर रूपमा बाधा पुर्‍यायो। जब हामी भर्चुअल बैठकहरू र घटनाहरूतिर फर्केका थियौं, धेरै कम्पनीहरूको नयाँ बिक्री ड्राइव गर्ने क्षमता ठोस थियो। यसको मतलब सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु वा हालसालका ग्राहकहरुलाई अपसल गर्ने पनि राजस्व कायम राख्न र उनीहरूको कम्पनीले टाढा राख्नु महत्वपूर्ण थियो।
उच्च-विकास संस्थाको नेतृत्वलाई ग्राहक अवधारणामा ध्यान दिन बाध्य पारिएको थियो यदि अधिग्रहणका अवसरहरू कम भए भने। म यो भन्न हिचकिचाउँदिन कि त्यो राम्रो खबर थियो ... यो धेरै संस्थाका लागि दर्दनाक स्पष्ट पाठ भयो कि उनीहरूले किनारमा कस्नुपर्‍यो र उनीहरूको ग्राहक संरक्षण रणनीतिलाई सुदृढ पार्नुपरेको थियो।
ग्राहक प्रतिधारण तथ्या .्क
त्यहाँ धेरै अदृश्य लागतहरू छन् जुन गरीब ग्राहक प्रतिधारणको साथ आउँदछ। यहाँ केहि स्ट्यान्ड-आउट तथ्या are्कहरू छन् जुन ग्राहक रिटेन्सनमा तपाईंको फोकस बढाउने छ।
67% of फर्केका ग्राहकहरूले बढी खर्च गर्छन् उनीहरूको पहिलो छ महिना भन्दा एक व्यापार देखि खरीद को तेस्रो वर्ष मा।
तपाइँको ग्राहक प्रतिधारण दर tention% ले वृद्धि गरेर, कम्पनीहरूले गर्न सक्दछन् नाफा बढाउनुहोस् २ to देखि 25%% द्वारा।
कम्पनीहरूको %२% यस कुरामा सहमत छन् ग्राहक अवधारण ग्राहक अधिग्रहण भन्दा कम लागत.
ग्राहकहरु को% 68% एक पछि एक व्यापार मा फर्कने छैन नराम्रो अनुभव तिनीहरुसँग।
%२% ग्राहकहरूले ब्राण्डलाई महसुस गर्छन् उनीहरू अधिक वफादार छन् उनीहरूले पर्याप्त गरिरहेका छैनन् इनाम ग्राहक वफादारी.
गत बर्षमा अमेरिकी ग्राहकहरुको %२% एक फरक ब्रान्डमा सरेका कारण ए गरीब ग्राहक अनुभव.
गणना गणना रिटेन्सन दर (ग्राहक र डलर)
सबै ग्राहकहरु तपाइँको कम्पनी संग उही पैसा पैसा खर्च गर्दैन, त्यसैले त्यहाँ अवधारण दर गणना को दुई माध्यम छन्:
ग्राहक प्रतिधारण दर (CRR) - ग्राहकहरूको प्रतिशत तपाईले संख्याको सापेक्ष राख्नुभयो जुन अवधिको सुरूमा थियो (नयाँ ग्राहकहरूको गणना गर्दै होइन)।
डलर प्रतिधारण दर (DRR) - तपाईले राजस्वको प्रतिशत राख्नु भयो जुन तपाईंले अवधिको सुरूमा पाउनु भएको राजस्वको तुलनामा थियो (नयाँ राजस्व गणना गर्दै छैन)। यसको हिसाब गर्नको लागि एक साधन भनेको तपाईंको ग्राहकलाई एक राजस्व दायरा द्वारा खण्डहरू बनाउनु हो, त्यसपछि प्रत्येक दायराको लागि CRR गणना गर्दै।
धेरै कम्पनीहरू छन् कि अत्यधिक लाभदायक वास्तव मा हुन सक्छ कम ग्राहक प्रतिधारण तर उच्च डलर प्रतिधारण जब तिनीहरू साना सम्झौताबाट ठूला ठेक्कामा सर्छन्। समग्रमा, कम्पनी धेरै साना ग्राहकहरु गुमाए पनि स्वस्थ र अधिक लाभदायक छ।
ग्राहक रिटेन्सनको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
बाट यो इन्फोग्राफिक M2 होल्डमा ग्राहक धारणा तथ्या details्कहरू विवरण दिन्छ, किन कम्पनीहरूले ग्राहक गुमाउँछन्, कसरी ग्राहक प्रतिधारण दर गणना गर्ने (सीआरआर), कसरी डलर प्रतिधारण दर गणना गर्ने (DRR), साथै विस्तृत रूपमा आफ्ना ग्राहकहरु लाई कायम राख्न:
आश्चर्य - अप्रत्याशित प्रस्तावहरू वा हस्तलिखित नोट सहित ग्राहकहरूलाई चकित गर्नुहोस्।
अपेक्षाहरू - निराश ग्राहकहरू अक्सर अवास्तविक अपेक्षाहरू सेट गर्नबाट आउँदछन्।
सन्तुष्टि - मुख्य प्रदर्शन सूचकहरूको अनुगमन गर्नुहोस् जसले तपाईंको ग्राहकहरू कत्तिको सन्तुष्ट छन् भन्ने अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ।
प्रतिक्रिया - तपाईंको ग्राहक अनुभव कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रतिक्रियाको लागि सोध्नुहोस् र ती समाधानहरू लागू गर्नुहोस् जुन सब भन्दा ठूलो प्रभाव हुन्छ।
सञ्चार गर्नुहोस् - निरन्तर तपाईंको सुधारहरू र मूल्यलाई कुराकानी गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई समयसँगै ल्याउनुहुन्छ।
केवल संतुष्ट ग्राहकहरु आफ्नो वफादारी कमाउन को लागी पर्याप्त छैन। यसको सट्टामा, उनीहरूले दोहोरिने व्यवसाय र रेफरलको लागि योग्य असाधारण सेवाको अनुभव गर्नै पर्छ। कारकहरू बुझ्नुहोस् जुन यस ग्राहक क्रान्तिलाई ड्राइभ गर्दछ।
रिक टेट, को लेखक सेवा प्रो: राम्रो, द्रुत र फरक ग्राहक सिर्जना गर्दै
प्रकटीकरण: म रिक टेटको पुस्तकको लागि मेरो अमेजन सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु।
टैग: सीआरग्राहक अनुभवग्राहक वफादारीग्राहक प्रतिधारणग्राहक प्रतिधारण दरग्राहक सन्तुष्टिग्राहक सेवाडलर प्रतिधारण दरdrहोल्डमा m2अवधारणसामाजिक मिडिया अधिग्रहणकिन ग्राहकहरु छोड्छन्
बिक्री आउटरीच: छ वटा रणनीतिहरू जुन हार्ट दिल (र अन्य सुझावहरू!)
अगस्ट 29, 2013 बेलुका 12:52 बजे
अगस्ट 29, 2013 बेलुका 10:56 बजे
उम। वाह। 🙂
खाली कुरकुरे! ग्राहक अन्तर्क्रियाले व्यवसायसँग ग्राहकको संलग्नतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।